साउदी अरबमा अबदेखि खुला भयो यी कुरा, के अरु देश जस्तै खुल्लाा भएको हो ? | समाचार
November 16, 2021 NepstokLeaveaComment on साउदी अरबमा अबदेखि खुला भयो यी कुरा, के अरु देश जस्तै खुल्लाा भएको हो ?
एजेन्सी, २९ कात्तिक। साउदी अरबमा पहिलो पटक महिला फुटबल लिग सञ्चालन हुने भएको छ। यस महिनाको अन्तिममा साउदीमा पहिलो पटक महिला फुटबल लिग सञ्चालन हुन लागेको हो। साउदी फुटबल फेडेरेसन (महासंघ)का अनुसार लामो समयपछि साउदीले महिला खेलकुदको लागि अवसरको ढोका खोलेको छ। प्रतियोगिता नोभेम्बर २२ देखि सञ्चालन हुने छ।
रुढीवादी साउदी अरेबियामा लामो समयदेखि महिला खेलकुदमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। राष्ट्रिय र क्षेत्रीय गरी नयाँ महिला फुटबल लिग दुई चरणमा हुने साउदी फुटबल महासंघले जनाएको छ। महासंघका अनुसार १६ वटा समूहले पहिलो चरणको खेलमा भाग लिनेछन्। पहिलो चरणको खेल राजधानी रियाद, जेदाह र दाम्माममा हुने छ।
अन्य समाचार : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आइतबार तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको निरीक्षण गर्नुभएको छ । तनहुँको ऋषिङ गाउँपालिका–१ झापुटारमा निर्माणाधीन आयोजनाको निरीक्षण गर्दै घिसिङले तोकिएको समयभन्दा एक वर्ष अगावै आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
आयोजनाको प्याकेज १ (हेडवक्र्सर) निर्माण कार्यका लागि निर्माण कम्पनी सिएमसी डि राभेना, इटालीसँग विसं २०७५ असोज १५ मा सम्पन्न खरिद सम्झौता रद्द भएपछि कम्पनीले विसं २०७६ वैशाख १२ गते पुनः बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । कम्पनीले उक्त बोलपत्र प्रक्रियामा प्राप्त कुनै पनि प्राविधिक बोलपत्र सारभूत रुपमा प्रभावग्राही हुन नसकेकाले सबै बोलपत्र अस्वीकृत गरी एशियाली विकास बैंकको खरिद निर्देशिका अनुरुप विसं २०७६ फागुन १६ गते दोस्रो पटक पुनः बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।
लामो समय पछि मेरी बास्सै मा चम्सुरीको अगमन गरियो भब्य स्वागतसहित सम्मान (भिडियो हेर्नुहोस)